कर्मनाशा करिडोर दोहनः अझै कारबाही भएन मेरो सिटी, होण्डा, किस्ट र लिटिल एन्जललाई – Mission Khabar
कर्मनाशा करिडोर दोहनः अझै कारबाही भएन मेरो सिटी, होण्डा, किस्ट र लिटिल एन्जललाई
मिसन खबर २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:५३
photo : nepalaaja
ललितपुर–उपत्यकाको खोला करिडोर संरक्षण गर्ने अभियान स्वरुप अहिले खोला किनारबाट सडक खुलेका छन्, कतिपय स्थानमा बन्दैपनि छन् । तर राज्यको नजर पर्न नसक्दा अझैपनि थुप्रै खोला अतिक्रमणमा परेका छन् । ललितपुरस्थित कर्मनाशा खोला पनि यस्तै भूमाफियाको कब्जामा परेको छ । बहाव समेत परिवर्तन गरेर भूमाफियाले विभिन्न संरचना बनाएका छन् । जनप्रतिनिधिले ‘कर्मनाशा करिडोर’ खुलाउने प्रयास जारी राखेपछि अहिलेसम्म सफल हुन सकिरहेका छैनन ।
२०२१ सालको नापीअनुसार यो जग्गा २८ नम्बर वडामा थियो अहिले २३ वडामा सरेको छ । पहिले बांगोटिंगो बग्ने नदी अहिले भूमाफियाको कब्जाबाट सोझिएको छ । मेरो सिटी अपार्टमेन्टले खोलाको पूर्वतिर बनाएको पुल र पर्खालकै कारण गत वर्ष साउन २८ मा आइजे पायोनियर स्कुल, काठमाडौं विश्वविद्यालयसहितका थुप्रै संरचना डुबानमा परेका थिए । जतिवेला तीन करोड बढीको क्षति भएको थियो ।
कर्मनाशा करिडोर अध्ययन गर्न भन्दै तीन महिनाअघि मात्रै ‘कर्मनाशा करिडोर सहजीकरण समिति’ गठन भयो । स्थानीय वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्र आफैं सहजीकरण समितिका अध्यक्ष बने । समितिले अधिकारसम्पन्न बाग्मती आयोजनासँग समन्वय गरेर कर्मानाशाको दायाँ–बायाँ १० मिटर छाड्नुपर्ने तथा १५ मिटर बहाव क्षेत्र निर्धारण पनि गर्यो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तह सफल भएन । कर्मनाशा करिडोरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर करिडोरभित्र बनाइएका संरचना हटाउन पत्राचार गर्ने योजनामा सहजीकरण समितिको क्रियाशिल छ ।
क–कस्ले कर्मनाशा खोला करिडोर मिचेका छन त ?
लिटिल एन्जल्स स्कुल – यो स्कुल परिसरमा पनि कर्मनाशाको धेरै जग्गा परेको छ । अतिक्रमित जग्गा छाड्नुको साटो कमजोरी गर्ने स्कुल प्रशासनले विद्यार्थी आउजाउमा असर पर्ने भन्दै संरचना हटाउन समय मागेको छ ।
मेरो सिटी अपार्टमेन्ट – संरचना बनाउँदा पाँच फिट ‘सेटब्याक’ छाड्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर कर्मनाशा करिडोरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ, हात्तीवनमा बन्दै गरेको ‘मेरो सिटी अपार्टमेन्ट’ । जसले महानगरको मापदण्ड बेवास्ता गरेको मात्रै छैन, कर्मनाशा खोलामै टसाएर आफ्नो संरचना बनाएको छ । अपार्टमेन्टका मालिक गणेश अग्रवाल शक्ति र पँहुचको दम्भ देखाएर कोला करिडोर दोहनमा क्रियाशिल छन् ।
होण्डा कम्पनी र किस्ट अस्पताल– खेलाकरिडोरमा देखिएको बद्मासीमा साविकको हरिसिद्धि गाविसको पनि हात हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् । खोला भएको ठाउँमा व्यक्तिको जग्गा छ । महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्ने खोला करिडोरमा होन्डा कम्पनीको सोरुम र किस्ट अस्पताल छ । उनीहरुले पनि मापदण्ड वेवास्था गरेर कर्मनाशा करिडोर अतिक्रमण गरेका छन् । यसरी थुप्रै व्यवसायीक घरानाको दोहनमा परेको छ, कर्मनाशा खोला ।
भर्खरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले छानविन गरेर कारबाही गर्ने भन्दै अध्ययन अनुसन्धान पनि अघि बढाएका छन् । शक्ति र पँहुचको बलमा खोलामा परिरहेको गिद्दे नजर जनताका प्रतिनिधिले तोडाउलान त ? हेर्न बाँकी नै छ ।